Isticmaalka habka bankiyada tilifoonada gacanta oo aad u kordhay. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhammaan afarta banki ee ugu waaweyn dalka ayaa sheegay in ay kordheen macaamiisha isticmaasha habka bankiga ee mobile-da. Foto: Jessica Gow/Scanpix
Isticmaalka habka bankiyada tilifoonada gacanta oo aad u kordhay.
La daabacay fredag 26 juli 2013 kl 09.25
Waxaa sii badanaya dadka danaha bankiyada ka fushada tilifoonada gacanta lagu qaato bedelkii ay istcimaali lahaayeen kombuyuutar.
Afarta banki ee ugu weyn dalka ee kala ah Handelsbanken, SEB, Swedbank iyo Nordea, ayaa lixdii bil ee ugu dambeysay waxay xaqiijiyeen in dad badan ay xisaabaadka bankiyadooda ka galeyn tilifoonada gacanta in ka badan kombuyuutar.
Annika Falkengren oo ah madaxa bankiga SEB ee dhowaantan bilaabay adeega bankiga ee tilifoonada gacanta ayaa sheegtay in bishii Juun in uu dareemay bankigooda macaamiisha oo si aad u isticmaalaya in xisaabaadka bankiyadooda ka galaan tilifoonada gacanta in ka badan halka ay ka geli lahaayeen kombuyuutar.
Madaxa bankiga SEB ayaa sheegtay maadaama ay korortay isticmaalka dadka bankiyada ka gala tilifoonada gacanta, in ay iyaguna isku day doonaan hab wanaagsan oo amaan ah sugaya nabadgelyada bankiga ee qofka marka uu tilifoonka ka gelayo xisaabta kaga furan bankiga.
Inkastoo tirada macaamiisha ka gasha xisaabaadkooda bankiyada tilifoonada gacanta kordheen, haddana weli waxaa jira macaamiil keliya isticmaasha habka soo jireenka ahaa ee kombuyuutarka.
Balse qofka kuma dhiiran karaan in danahooda bankiga ka galaan tilifoonka gacanta?
Fredrik Ljunggren oo ka tirsan shirkad ka tala bixisa nabad gelyada cilmiga tiknoolijiyada ee IT lana yiraahdo Kirei ayaa aminsan in bankiyada dalka ay leeyihiin hanaan sugan oo la isku haleyn karo:
- (( Waxay ila tahay in qofka uu amini karo adeegsiga bankiga ee tilifoonka gacanta. Dabcan mar walba waa loo baahan yahay in taxadar jiro oo la ilaalshado lambarada sirta, kaararka iyo waxii la mid ah lana raaco hab tilmaamaha sida loo isticmaalo aaladahan,)) ayuu yiri Fredrik Ljunggren.